Tawaldee G/ Maariyaam: 'Kufee caccabuu xiyyaarichaaf balaliiftotni gaafatamtoota hin ta'an' - BBC News Afaan Oromoo
Tawaldee G/ Maariyaam: 'Kufee caccabuu xiyyaarichaaf balaliiftotni gaafatamtoota hin ta'an'
Hojii Gaggeessaa Olaanaan Daandii qilleensa Itoopphiyaa Obbo Tawalda Gabramaariyaam balaa kanaaf karaa kamiinuu balaliiftoonni itti gaafatamo ta'u hindanda'an jedhan
Kanneen balaa kanaaf balaliiftoota komatan warra dogongoraniifi ragaa hinqabneedha jechuunis ibsaniiru.
Miseensi kongirasii US tokko balaawwan qaqqabaniif itti gaafatamtoota ta'u kan qaban balaliiftoota jechuu isaatii hordofeeti hojii gaggeessichi deebii kana kan kennan.
Xiyyaarri oomisha Boeing ta'e, 737 Max 8, baatiiwwan shan gidduutti yeroo lama balaan isa mudateera. Kunis daandii qilleensaa Itoophiyaa fi kan Indoneeshiyaa Laayiin Air turan.
Gabaasni sadarkaa jalqabaa balaawwan lamaanu akka mulliseetti, rakkinni sirna to'annoo balaliinsaan walqabate xiyyaarota kana mudate balaa umameef sababa akka ta'e ibseera.
Miseensa kongirasii US kan ta'an Saam Gireviis garuu 'ragaan gabaasa sadarkaa jalqabaa irratti kaa'amee dogongora balaliiftootaa mul'isa yoo jedhan dhagahaman.
Itti dabaluunis 'xiyyaarota kanneen haalaan to'achu kan danda'an balaliiftoota US keessatti leenjii'an turan' jechuunis yaada kennaniiru.
Obbo Tawaldan garuu Saam Gireviis 'ragaa sirrii harka isaaniirra hinqaban. Gabaasoonni kan himan ammo balaliistonni tarkaanfiiwwan barbaachisu hunda fudhataa turan,'' jechuun BBC'tti himaniiru.
'Sirni xiyyaarichaa 'AMCAS' jedhamus yeroo rakkisaattillee xiyyaarichi balaliiftootaaf akka ajajamu taasifamee kan hojjatameedha.
Haa ta'u malee, tibba balaawwan mudatan lamaanittu sirni kun xiyyaaroonni funyaan isaanii gara lafaatti akka garagaluuf dirqisiiseera. Balaliiftoonnis xiyyaaricha to'achuuf yaalii taasisanillee ajajamuufi hindandeenye jechuun waan gabaasni sadarkaa jalqabaa ka'ee eeraniiru.
Balaan xiyyaara Indoneshiyaa erga mudatee booda Boeing waa'ee sirna AMCAS jedhamu irratti daandiiwwan qilleensaatiif ibsa ergeera. Miseensi koongirasii kun garuu balaliiftooti ET 302 ibsa kana haalaan hin hubannee ture jechuun komata.
Gireevis komiisaa yoo dhiyeessu bakkichatti argamanii kan turan, itti gaafatamaan Aviyeeshinii Federaala US kan yeroo, yaada miseensa konigirasichaan kan walii gala ta'u eeruun, yaalii balaliistootaan 'carraa-dhabdoota' jedheeniira.
Obbo Tawaldan garuu komiisaanii kana fudhachu kan danda'u eenyu akka ta'e ifaadha, 'xiyyaarichi rakkina akka qabu addunyaatu beeka. Kanaaf natti fakkaate xiyyaaroonni gosa kanaa hojiin ala taasifamuun sirreeffamni irratti taasifamaa kan jiru'' jedhaniiru.
Namoonni balaa qaqabeef balaliistoota komatan gaaffi tokko akka mataasanii gaafatanan barbaada. ''Rakkinichi kan balaliistotaa erga ta'e xiyyaarroonni Boeing, 380 addunyaa guuttuutti argaman maaliif hojiin ala taasisuun barbaachisee? jechuunis gaafatu.
Tarii Ameerikaan komicha daandiin qilleensa Itoophiyaa akka fudhatu barbaadeetii laata? Jechuun gaaffii BBC irraa dhiyaateef deebii lakkii jechu deebiisaniiru Obbo Tawaldan.
Itti gaafatamaan Boeing Deeniis Miiyulbarg 'Boeing daandiiwwan qilleensaa waliin haalaan odeeffannoo walii dabarsaa hin turre. Boeing dogongora raawwateera' jechuun amananiiru.
Itti dabalunis Boeing 737 Max bara kana keessa gara hojiitti ni deebii'a jedhanii akka yaadan dubbataniiru. Hojii gaggeessaa Olaanaan Daandii qilleensa Itoopphiyaa Obbo Tawalda Gabramaariyaam balaa kanaaf karaa kamiinuu balaliiftoonni itti gaafatamoo ta'u hindanda'an jedhan.